Sida loo doorto nherka saxda ah ee Amazon iyo cadeeyaa ereyada ugu muhiimsan ee la raadiyay halkaa?
Ugu horreyntii, waxaan ku talinaynaa inaad bilowdo habka aad u heli lahayd ereyada ugu muhiimsan ee laga raadsado Amazon oo leh miis siman oo la abuuray, tusaale ahaan, adoo isticmaalaya Google Spreadsheets. Wax walbaa waa inaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ugu badan ee la dalbado xilligan, iyada oo loola jeedo inay noqon karto mid lagu abaalmarin karo faa'iidada faa'iidada ugu sareysa. Oo weliba waxaad ku wanaagsanaan lahayd inaad ku darto laba jibbaar midabyo kala duwan oo midba midka kale ka mid ah. Habkaa, waxay noqoneysaa mid sahlan in si dhakhso ah loo kala saaro dhibcahooda daciifka ah marka la ogaado, iyo sidoo kale si cad u qaabeeya dhinacyada ugu xooggan ee ay sameeyeen nuqul kasta, iyada oo la tixraacayo ereyada ugu muhiimsan ee la baaray iyo calaamadaha kale ee caanka ah ee la xidhiidha warshadaha ama qaybta wax soo saarka. Marka, marka aad samaysay liiska hubinta ee muhiimka ah, waa waqtigii aad isku duwi laheyd dhammaan suurtogalka suurtogalka ah ee ku saabsan ereyada ugu muhiimsan ee la raadiyay ee Amazon - phon a parete per hotel. Waxa lagama maarmaan ah in la daboolo dhammaan xuduudaha muhiimka ah iyo tirakoobka shabakada guud ee shey kasta oo aad u socoto. Halkan waxaa ah qaabka ugu fiican ee lagugula talinayo inaad buuxiso liiska hubinta ee Google Spreadsheets - hubso inaad wax kasta oo ka mid ah kuwan soo socda:
1. Niche - waa inay noqdaan qaybta koowaad ee baaritaankaaga si aad u bilawdo. Si tartiib ah u sii wado shaandhaynta isbedel kasta oo furan si aad u hesho jaantuska hadda ka buuxsamaya ciddii dalbanaysa ee aad filan karto inaad noqoto xulashada ugu dambeysa ee saxda saxda ah ee Amazon leh ereyada ugu muhiimsan ee la raadiyay ee ku lug leh qaybta.
2. Qiyaasta Celceliska Maadada - halkan waxaa laguu soo jeedinayaa inaad qorto qiyaas kasta oo qiyaasta ah ee mugga raadinta ee celcelis ahaan la qaaday. Badbaadada, qiimaha celceliska celceliska waxaa lagu muujin doonaa qalabka KWFinder.
3. Qaab-celinta Baaxadda Bulshada - Qaybtan waxaa loola jeedaa inay tilmaamayso isbeddellada muhiimka ah ee mugga raadinta iyo qaab-dhaqameedkiisa guud ee ku saabsan isbeddelka firfircoon (laga soo bilaabo foomka ugu hooseeya illaa heerka ugu sarreeya isbedelka). Tilmaam: Waxaad si fiican u haysan laheyd qaybtan xogta kala duwan marxaladaha bil kasta mar. Ereyga muhiimka ah ee tartanka - waa meesha dhabta ah ee loogu talagalay in aad sameyso qiimeyn gaar ah oo muhiim ah oo muujinaya tartamadoodii iyo isdaba-marintooda dhinaca kale keywords searched in niche. Haddii aad isticmaaleysid KWFinder, waxaa lagaa caawinayaa heerarka kala duwan ee tartanka. Waxaan u jeedaa in sababo qaar ay ugu yeeraan "Competition Rank" ee SEO.
5. High DA - isticmaal labada qalab ee KWFinder ama SERPchecker si loo qeexo tirada boggaga ama bogagga shabakadda ee ku jira natiijooyinka raadinta Google ee tobanka-10 waxay heleen dhibcahooda Hay'adda Domain Authority oo ka soo baxday 40 pts.
6. PA, TF, TF - ku dhowaad is-sharaxan oo u eg sida tiirka hore, seddexda qaybood ee soo socota ayaa ah inay muujiyaan bogga / bogga isku midka ah ee hay'adda Page (PA), Caddowga Maqalka (CF), iyo waliba Trust Flow (TF) kasta.
7. Suurtagalinta ugu Yar ee ugu Horeeya - Qeybta ugu dambeysa iyo tan ugu muhiimsan waxaa loola jeedaa in lagu muujiyo kala duwanaanshaha ugu muhiimsan iyo natiijooyinkaaga ugu dambeyntii ee kuugu muhiimsan ee ereyada la raadiyay ee leh Amazon niches ugu qiimeeya qiimeynta. Xisaabintaas (haa, waxay u muuqan kartaa mid sax ah) Waxaan soo jeedinayaa isticmaalka AmaProfits com ama adeeg kasta oo internetka ah oo isku mid ah - oo aad samaysay.